Kooxda Daacish oo xaqiijisay dilka hoggaamiyahoodii | Berberanews.com
Home WARARKA Kooxda Daacish oo xaqiijisay dilka hoggaamiyahoodii
Kooxda Daacish oo xaqiijisay dilka hoggaamiyahoodii
W/Wararka(Berberanews.com):- Kooxda la baxday Khilaafada Islaamka ee Daacish,ayaa qirtay geerida Hoggaamiyahoodii hore Abu Baker Al-Baqdaadi isla markaana ku dhawaaqay ninka ay ku bedeleen ee hadda hoggaamiyaha u ah.
Qaar ka mid ah warbaahinta ku hadasha afka ururka la magac baxay Qilaafada Islaamka ee Daacish ayaa qiray dhimashada hogaamiyahoodii Abu Bakar Al Baqdaadi oo maalmihii u dambeeyay warka dhimashadiisa aad loo hadal hayay ka dib markii dawladda Ruushku ay sheegtay in ay duqayn dhanka cirka ah ku dishay.
Warar hordhac ah oo ka soo baxaya kooxda Daacish ayaa waxa ay sheegayaan in Abu Bakar Al Baqdaadi lagu badalay nin u dhashay dalka Tunisiya kaas oo lagu magacaabo Mohamed Ben Salem Al Ayouni balse gudaha kooxda Daacish looga yaqaan Jalaludiin Al Tunisi .
Mohamed Ben Salem Al Ayouni (Jalaludiin Al Tunisi) oo u dhashay dalka Tuunisiya ayaa hadane waxa uu heystaa dhashalada dalka Faransiiska .Hogaamiyihii ururka Daacish Abu Bakar Al Baqdaadi ayaa dhawaan waxaa lagu dilay duqeyn dhanka cirka ah waxaana dilkaas sheegatay dowlada Ruushka.
Previous articleSafiirka Turkiga ee Somaliland oo ka hadlay Sannad-guurada koowaad Afgembigii fashilmay ee Turkiga
Next articleIsrael oo Masjidka Qudus ka qaaday xayiraad ay Jimcihii ku soo rogtay